Nhau nhatu kubva kuFrance. Kuramba uye rudo. | Zvazvino Zvinyorwa
Nhau nhatu kubva kuFrance. Kuramba uye rudo.
The Nightingale - Kunyarara kwegungwa - French suite
Kune vateveri venhoroondo yenhoroondo yakamisikidzwa muhondo yechipiri yenyika, uye kunyanya kunguva yekutora kweFrance nemauto eGerman, nhasi tinoyeuka mazita matatu aya: The Nightingale, weNorth American Kristin Hannah, imwe yeanobudirira uye akatengesa zvinyorwa zvemazuva ano; Kunyarara kwegungwa, kubva kuVercors; Y French suiterakanyorwa naIrène Némirovsky. Vaviri, vanyori veFrance vakanyora nyaya idzodzo chaizvo mumazuva akasviba. Némirovsky akatova nemhedzisiro inosiririsa ipapo.
Zvichida vaverengi vema cinematic vakaona iyo firimu inoenderana neyekupedzisira maviri, kunyanya ichangoburwa imwe ye French suite. Uye chokwadi che The Nightingale Hazvitore nguva kuita imwe nekuda kwekugona kwayakaitawo. Ngationgororei iyo Zvakajairika nyaya dzavanogovana nezve iyo French Resistance kurwa, asi zvakare nezve kupokana kwakawanda mumanzwiro izvo zvakaitika pakati pevapinda nechisimba.
1 The Nightingale - Kristin Hannah
2 Runyararo rwegungwa - Vercors
3 French Suite - Irène Némirovsky
3.1 Nei uchiaverenga (kana kuvaona)
Yakanaka mutero kuvakadzi vazhinji vasingazivikanwe avo vakarwa muhondo vachirwisa maNazi nezvombo chete zvetariro yavo, ushingi, kuzvipira uye kunyarara asi kurwisa kunouraya. Iyo nyaya yemasisita eMauriac, aine akasiyana mavara asi avo simba rinopfuura kudarika kwavo kusiyana, inoda kumiririra vese.
Muna 1939 France Vianne anorarama mutaundi diki nemurume wake Antoine nemwanasikana wavo Sophia. Asi rimwe zuva anofanirwa kudzinga murume wake, uyo anofora akananga kumberi hondo isati yatanga. Iye haafunge kuti maGerman achapinda muFrance, asi ivo vanozviita uye munguva pfupi kaputeni wechiGerman anouya kuzotora imba yake. Kubva ipapo zvichienda mberi ivo vanofanirwa kudzidza kugara nemuvengi kana nenjodzi yekurasa zvese. Sezvo makore ebasa apfuura uye achikura, Vianne achafanirwa kuita sarudzo dzakaomarara kuti arambe achirarama.
Ukuwo, munin'ina wake, Isabelle, mukadzi mudiki anopandukira anotsvaga uye anowana chikonzero chehupenyu hwake mukurwisa maGerman. Kusangana kwake naGaëton, mubati weResistance, kunomufunga kuti ashande navo kubva kuParis. A) Hongu, inobatsira vabatsiri vakawira muvhu reFrance, kunyanya vatyairi, kuti vadzokere kunyika dzavo. Kuti aite izvi, achakwanisa kutsvaga nzira yekubuda ichiyambuka muganho neSpain.
Izvo zvakanyorwa muzvikamu zviviri: mune yekutanga-munhu munyoreri aripo uye mune anoziva zvese zvakapfuura. Emotional uye zvinonakidza, zviri nyore, akareruka uye anomhanyisa-anomhanya prose inokwanisa kukufambisa iwe uine kufarira kuburikidza nechirongwa.
Runyararo rwegungwa - Vercors
Waive yakanyorwa muna 1941 uye yakaburitsa gore rinotevera muchivande muParis inogarwa nemaNazi. Yakabva yangova chiratidzo chekupokana nemaGerman. Zvinoita sekudaro Vercors yaive yakavakirwa pachiitiko chechokwadi nekuti akange apinza mumba make mupurisa wechiGerman aine gumbo rakaomarara uyo airidza tenesi kuti apore. Havana kuumba chero hukama, kunyangwe Vercors akaona kuti mupurisa aiyemura France nekuti aive nemabhuku mazhinji eFrance.
Taura kuti a Mumwe mukweguru nemuzukuru wake mudiki, zvakare vagari veguta, vanosarudza kushandisa iko kuramba nekuramba kutaura kuna kaputeni wechiGerman uyo ari kugara mumba mavo.. Iye murume wemauto netsika uye aimbove munyori wemimhanzi, pamwe nehunhu, ane hunhu uye anonzwisisa mamiriro acho ezvinhu. mabvazuva ichaedza kuswedera padyo navo nema monologue nezve tariro yehukama uye kuyemedzana pakati penyika mbiri. Asi hazvizobudirire. Mukupedzisira anoshungurudzika paanoona kuti chinangwa chekupedzisira chevanhu vake hachisi chekuvaka asi chekuparadza uye anozopedzisira asiya. Zvisinei, haazosiyi asina hanya kana murume akwegura kana kunyanya muzukuru wake, uyo anofungidzirawo zviitiko zveResistance yakatenderedza uye panguva imwechete anonzwa kukwezva zvakanyanya kuna kaputeni.
Runako rwezvimwe ndima hazvirambike. Senge mune izvi:
Werner Von Ebrennac akatarisa mwana wehanzvadzi yangu, chimiro chake chakachena, chakaomarara uye chemagariro, mukunyarara uye nekusimbirira kukuru umo, zvisinei, zvisaririra zvekunyemwerera zvichiri kutenderera. Muzukuru wangu aigona kutaura, ini ndakamuona akatsvuka zvishoma, mukono wakaumbwa pakati petsiye dzake. Akaenderera nezwi rake rakanonoka:
-Pane nyaya yandaverenga, yawakaverenga iwe: Runako nechikara. Runako rwakashata ... Chikara chinaye paari netsitsi, chisina simba uye chakasungwa, uye chinomisikidza pamaawa ese ezuva kuvepo kwayo kusingagone uye kunotyisa. Runako runodada, runokudzwa ... rwakaomarara. Asi chikara chakakosha kupfuura chinoratidzika. Ane moyo nemweya unoshuvira kusimuka. Kana runako ruchida ...
heyi maviri mafirimu mavhezheni enoveli iyi, imwe kubva muna 1949 uye imwe yacho kubva muna 2004. Kune avo vanoda kuvatarisa.
French Suite - Irène Némirovsky
Hapana mubvunzo rimwe remazita anozivikanwa uye anozivikanwa emunyori uyu wekuRussia ndokutamira kuFrance aive Némirovsky. Zvizhinji kubva pakubudirira vhezheni yavakaenda nayo kumabhaisikopo muna 2014. Asi nyaya dzevose vari vaviri, inoverengeka nemunyori, zvakare dzinobva mufirimu, kunyangwe zvinoshamisa chaidzo.
French suite es hunyanzvi hwake chete nekuti mukana waibvumidza. Chinyorwa chisina kupera chakawanikwa nemukana nevanasikana vake uye chakaburitswa muna 2004., angangoita makore makumi manomwe mushure mekunge Némirovsky, pamwe nemurume wake, vadzingwa uye vakapondwa kuAuschwitz muna 1942.
Nedzimwe nhoroondo yehupenyu hwayo sezvo ichiratidza chikamu chehunhu hwebourgeois nzanga mumakore iwawo, fYakave nepamuviri muzvikamu zvishanu, asi Némirovsky akanyora maviri chete: Dutu muna june y Dolce, uko imwe nyaya yekugamuchirwa uye yekurega basa inoitika mukutarisana nemamiriro ezvinhu. Asi kusava nehanya kwevaFrench kumamiriro ezvinhu zvakare kwakamira, uko kune zvakare kunotsoropodzwa. Nekudaro, zvakare zvakare isu tinoona sei, kunyangwe aya mamiriro, ari ekutanga kana manzwiro epasirese anobuda pakati pevatambi. Zvekare kukwezva kwakarambidzwa uye chishuwo uye kurwira kuzviramba asi panguva imwechete vanozvida.
Iyo 2014 firimu inoenderana yakakwenenzverwa zvikuru.
Nei uchiaverenga (kana kuvaona)
Nekuda kwekushamisika kwekufananidzwa kwayo, madingindira ayo akajairika eakasiyana maonero epasi, kubva padyo padyo kusvika kune chaiyo chaiyo yapfuura.. Vanyori vakasiyana uye tsananguro dzakafanana, mifananidzo, kuratidzwa. Pfungwa isingagumi yakagovaniswa: kujekesa izvo zvinobatanidza kupfuura izvo zvinopatsanura. Idzo mhuka dzisiri monsters uye vasina mhaka vasina mhosva. Uye pamusoro pezvose, kwepasirese manzwiro uye kupokana kusingaperi. Nyaya dzakafanana, pfungwa dzakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Nhau nhatu kubva kuFrance. Kuramba uye rudo.
Ini ndaisaziva Kunyarara kweGungwa, kuti ndione kana ndichigona kuibata. Yakanaka chinyorwa, ndinokutendai zvikuru.
Literary mutambo: Ndeapi mabhuku anoita izvi zvidimbu uye mavara anoenderana?